Muhiimadda xargaha dhexda
Waxaa jira noocyo badan oo dhexda dhexda ah, waana inaad tixgelisaa baahiyahaaga gaarka ah markaad dooranaysid, oo ka qiimee qodobbada soo socda. 1. Ujeeddada laga leeyahay ilaalinta laf-dhabarka ama sinta? Midka hore wuxuu ubaahanyahay inuu iibsado waardi sare, qeybta dambe wuxuu ubaahanyahay inuu iibsado waardiye hoose oo hoose. Bukaan ...
Si sax ah ma u isticmaashaa suunka taageerada caloosha?
Doorka suunka taageerada caloosha uurka badanaa wuxuu ka caawiyaa haweenka uurka leh inay kor u qaadaan caloosha. Waxay caawimaad siisaa kuwa dareema inay caloosha xoogaa tahay oo ay u baahan tahay inay caloosha gacmahooda ku qabato markay socoto, gaar ahaan marka seedaha isku xidha miskaha ay kala baxaan. Wixii p ...
Suufka jilibka waxaa loola jeedaa shey loo isticmaalo in lagu ilaaliyo jilbaha dadka. Waxay leedahay shaqooyinka ilaalinta isboortiga, ka hortagga qabowga iyo diirimaadka, iyo dayactirka wadajirka ah. Waxaa loo qaybiyaa jilbaha jilbaha isboortiga iyo jilbaha jilibka caafimaadka. Waxay ku habboon tahay cayaartoyda, dadka da'da dhexe iyo dadka da'da ah, iyo bukaannada qaba k ...
Waa maxay shaqada faashadda saddexagalka?
Faashadda saddex-xagalka waxay umuuqataa inay si muuqata nolosheena ugu muuqato, laakiin ha dhayalsan saddexagalka. Kaalinta ay ku leedahay mihnadda caafimaadka waa in aan la dhayalsan. Faashadda saddex-geesoodka ah waxaa badanaa loo isticmaalaa in lagu ilaaliyo nabarrada laguna hagaajiyo addimada dhaawacmay. Haddii loo baahdo, waa in lagu fuliyaa faashado ...
Ogeysiis tan markaad isticmaaleysid xusulka suxulka
Tilmaamaha suxulka suuxdinta: murgacashada muruqyada isgoyska dhexe iyo dambe ee xusulka. Suxulka jilibka iyo dabacsanaanta qalliinka ama jabka ka dib. Daaweynta muxaafidka ah ee xusulka wadajirka ah iyo dhaawaca unugyada jilicsan iyo ka hortagga qandaraaska. Pa hoose ...
Jilibka jilicsan ee orthopedic lagu hagaajin karo
Jilibka jilibku waa qaab dhismeed isku dhafan oo ku dhow qaabdhismeedka jirka bina-aadamka oo si dhow loogu xidhi karo unugyada isku-xidhka bini-aadamka si ay uga dhigto mid raaxo leh oo ku habboon. Chuck oo leh xagal la hagaajin karo, waxaa lagu hagaajin karaa xaglo kala duwan iyadoo loo eegayo baahiyaha ...
Hordhaca qoorta ilmagaleenka
Katiinka ilmo-galeenka waa qalab daaweyn gargaar leh oo loogu talagalay spondylosis afka ilmo-galeenka, kaas oo xakameyn kara oo ilaalin kara laf-dhabarka ilmo-galeenka, yareyn kara xirashada dareemayaasha, yareyn karaa fal-celinta naxdinta leh ee kala-goysyada is-goysyada, wuxuuna faa'iido u leeyahay dib-u-soo-celinta unugyada xubnaha jirka iyo qanjirada.